မြန်မာ့အနာဂတ်အတွက် အရေးပါသော နည်းပညာ - Myanmar Network
မြန်မာ့အနာဂတ်အတွက် အရေးပါသော နည်းပညာ
Posted by Khin Hnin Soe on October 18, 2012 at 13:30 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
ထိုင်း၊ အမေရိကား၊ သြစတြေးလျ စသော နိုင်ငံတို့တွင် မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် Scholarship ပေးသော လိုင်းတွေက သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာတို့နှင့် ဆိုင်သောလိုင်းမျိုးတွေ ပါလေ့မရှိဘဲ Social Science၊ Southeast Asian Studies၊ Development Studies၊ Communications၊ Community Development စသော လိုင်းတို့ များသည်။ အဲဒါတွေ မြင်ရတော့ scholarship ပေးသောအဖွဲ့အစည်းတွေက မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ တိုးတက်ဖို့အတွက် သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ၊ စက်မှုပညာတို့နှင့် ပတ်သက်သော ဘွဲ့ရသူတွေ မလိုအပ်ဖူး ထင်နေလားဟု တွေးမိသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီအများအပြား ၀င်ရောက်ဖို့ စီစဉ်နေကြသည်။ ထိုကုမ္ပဏီတွေ ၀င်ရောက်သောအခါ နည်းပညာ၊ စက်မှုပညာတို့နှင့် ဘွဲ့ရပြီး တတ်ကျွမ်းသော သူများ လိုအပ်လာပေမည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်ကျော် ကာလများတုန်းက စင်္ကာပူနိုင်ငံ စတင်ထူထောင်ချိန်မှာ တိုးတက် ခေတ်မီသော စက်မှုလက်မှုနိုင်ငံ အဖြစ်ရောက်ရှိရန် လူငယ်အများအပြားကို နည်းပညာပိုင်းတွင် ထိုအချိန်က ထိပ်တန်းရောက်နေသော အင်္ဂလန်၊ အမေရိကား စသော နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ပညာသင်စေခဲ့သလို၊ နိုင်ငံအတွင်းမှာလည်း နည်းပညာပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်တန်းတွေပေးပြီး နိုင်ငံသားများ၏ အတတ်ပညာပိုင်းကို တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
ယခုလက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်တွင် နည်းပညာပိုင်းအရ ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ကြည့်လျှင် ၁၉၇၀ ခုနှစ်မှာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရသူ ခြောက်ထောင် သာရှိခဲ့သည်၊ ၁၉၈၀ ခုနှစ် မှာ အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ရသူ တစ်သောင်းလေးထောင် သို့ မြှင့်တက်သွားသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာတော့ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရသူ ရှစ်သောင်းရှိခဲ့သည်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ စီးပွားရေးကို ထိုနှစ်တွေအတွက် တိုင်းတာကြည့်ရင် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရသူဦးရေ မြင့်တက်လာသလို တိုင်းပြည် စီးပွားရေးလည်း တိုးတက်လာကြောင်း တွေ့နိုင်သည်။
နာမည်ကျော် အမေရိကန် ရူပဗေဒပညာရှင် Dr. Michio Kaku နောက်ဆုံးရေးသားသော စာအုပ်ထဲတွင် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းတိုင်းမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော chip တွေဆိုရင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မှာ စာရွက်တရွက်လောက်ပဲ တန်ဖိုးရှိလာတော့မယ်၊ ၂၁၀၀ ခုနှစ်မှာ လူတွေဟာ ကွန်ပျူတာတွေကတဆင့် အရာဝတ္ထုတွေကို စိတ်နဲ့ ရွှေ့နိုင်ကြတော့မယ် စသဖြင့် ခန့်မှန်းထားသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ အမေရိကားရှိ နာမည်ကျော် MIT တက္ကသိုလ်မှ အင်တာနက်ကို ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်မှာ ကြည့်တာမဟုတ်ဘဲ အင်တာနက် မျက်မှန်ဟုခေါ်သော မျက်မှန်သားပေါ်ကနေ ကြည့်နိုင်အောင် ဖန်တီးခဲ့သည်။ နောင်တချိန်တွင် အင်တာနက်ကို မျက်မှန်သားပေါ်မဟုတ်ဘဲ contact lense သုံးပြီး ကြည့်နိုင်အောင် စမ်းသပ်နေကြသည့်အကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားသည်။
ဒါ့အပြင် အခုဆိုရင် ခေတ်မီသောနိုင်ငံတွေမှာ Smart Home ဟုခေါ်သော အိမ်မှာရှိသော မီးခလုတ်တွေ၊ တီဗွီ၊ ရေခဲသေတ္တာစသော စက်ပစ္စည်းတွေကို အင်တာနက်ကနေ လိုသလို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊ အိမ်မှာ မရှိသောအချိန် ကိုယ့်အိမ်မှာ ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာ အိမ်မှာ တပ်ထားသော ကင်မရာများကို အင်တာနက်မှတဆင့် ကြည့်လို့ရသည်။
ထိုသို့သော ခေတ်မီတိုးတက်မှုများအကြောင်းကြားရတာ တချို့မြန်မာတွေအတွက် မယုံနိုင်စရာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက်တောင် နေရာတိုင်းမှာ သေချာကောင်းကောင်းမရ။ အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကလည်း အတော်နှေးသေးသည်။ ဖုန်းလိုင်းတွေကလည်း သေချာမကောင်းသေး။ electronics banking system နှင့် credit card စနစ်နှင့် ATM စက် ဆိုတာမျိုးတွေလည်း ဘဏ်တွေမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မသုံးနိုင်သေး။ အချက်အလက်တွေ မှန်သမျှကို ကွန်ပျူတာထဲမှာ ထည့်သွင်းတာမဟုတ်ဘဲ ရုံးဌာနတွေမှာ ဖိုင်တွေအထပ်လိုက်နှင့် သိမ်းထားစမြဲ ဖြစ်သည်။
ဒီလိုသာ ဆက်သွားခဲ့မည်ဆိုလျှင် နည်းပညာပိုင်းအရ ခေတ်မီသော မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့အရေး တွေးမရနိုင်သလို ဖြစ်နေသည်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ အမြန်ရထား (MRT) စနစ်ကို လိုက်လုပ်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံက ခုမှကြိုးစားနေသည်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ထိုအမြန်ရထားစနစ်ကို ၁၉၈၇ ခုနှစ်ထဲက စတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကစပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် အင်တာနက် နှင့် ဖုန်းလိုင်းများ အလွန်မြန်ဆန်သောနှုန်းနှင့် သွားနိုင်စေသော fibre optic cable များကို လူနေအိမ်များနှင့် ရုံးခန်းများအတွက် စတင်ဆက်သွယ်ပေးခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလလောက်မှာမှ စင်္ကာပူကုမ္ပဏီတခုက fibre network ကို လာရောက် တပ်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း သတင်းမှာ ဖတ်လိုက်ရသည်။ သူများနိုင်ငံနောက်မှာပဲ မဖြစ်ချင်လျှင် ခုချိန်က စပြီး မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနှင့် နည်းပညာပိုင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာလူငယ်များကို အနာဂတ်အတွက် မွေးထုတ်ရန် အရေးပေး စီမံဖို့ လိုအပ်နေသည်။
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး စက်မှုတက္ကသိုလ်များကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တော့မည့်အကြောင်း သတင်းထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတော့ စိတ်ထဲအတိုင်းထက်အလွန် ၀မ်းသာမိသည်။ ဒါက ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
နောက်ဆက်တွဲကတော့ နည်းပညာဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များမှ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီသော ဘွဲ့ရလူငယ်များ မွေးထုတ်ပေးဖို့ ဖြစ်သည်။ နည်းပညာဆိုသည်မှာလည်း အချိန်နှင့်အလိုက်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်များအတွက် ဆရာ ဆရာမတွေ သင်ရိုးညွှန်းတန်းတွေက ထိုပြောင်းလဲမှုများနှင့် ခေတ်နှင့်အမီလိုက်နိုင်ဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်သည်။
အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ခဲ့သူအနေနှင့်ရော စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ Polytechnic မှာ Engineering Diploma ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တွေ သင်ကြားခဲ့သော ဆရာမတယောက်အနေနှင့်ပါ မြန်မာလူငယ်တွေကို အင်ဂျင်နီယာ၊ အိုင်တီ စသော နည်းပညာနှင့်ဆိုင်သော လိုင်းတို့ကို ရွေးချယ်စေချင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရင် ဂုဏ်ရှိလို့၊ အလုပ်ရနိုင်လို့ ဆိုတာထက် စိတ်ပါဝင်စားတာမျိုး ဖြစ်စေချင်သည်။ တကယ် ကိုယ်က စိတ်ဝင်တစား သေချာတစိုက်မတ်မတ်လုပ်မှ တီထွင်မှုတွေကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာ ဖြစ်သည်။
Microsoft ကို တည်ထောင်ခဲ့သူ Bill Gates ဆိုရင် အသက် ဆယ့်ခြောက်နှစ်အရွယ်လောက်မှာ သူ၏ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များရေးသောအချိန်က ပျမ်းမျှ တစ်နေ့ကို ရှစ်နာရီ၊ တစ်ပတ်မှာ ခုနှစ်ရက်လုံး ရှိခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်တွေ ရေးနေရတာကို အရမ်း စွဲလမ်းနှစ်သက်တယ်ဟုလည်း Bill Gates က ပြောခဲ့သည်။ နာမည်ကျော် အမေရိကန် ရူပဗေဒပညာရှင် Dr. Michio Kaku ကလည်း အထက်တန်းကျောင်းသား ဘ၀တုန်းက သူ့တီထွင်စမ်းသပ်မှုတွေကြောင့် သူ့အိမ်မှာ မီးအခါခါ ပျက်ရတယ်ဟု ရယ်စရာအဖြစ် ပြောခဲ့တာ ဖတ်ဖူးသည်။
ခုဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံက ကမ္ဘာမှာတင်မက အရှေ့တောင်အာရှမှာတောင် စင်္ကာပူ၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှားတို့လို နိုင်ငံတွေထက် နည်းပညာပိုင်းမှာ နောက်ကျနေသေးသည်။ အမြန်ရထားဆောက်ဖို့၊ ပိုမြန်ဆန်သော အင်တာနက်လိုင်းတွေ ချဖို့ စတာတွေအတွက် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ အကူအညီနှင့် သူတို့ဆီက တတ်ကျွမ်းသူတွေ ခေါ်ရသည်။ တကယ်လို့ ခုအချိန်မှာ မြန်မာလူငယ်တွေက နည်းပညာပိုင်းကို စပြီး လေ့လာမသင်ယူခဲ့လျှင် နောင် ဆယ်စုနှစ်များစွာမှာလည်း သူများထက် နောက်ကျပြီး သူများအကူအညီကိုပဲ အားကိုးနေကြရမည်။
၁၉၄၃ ခုနှစ်က အမေရိကန် ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော IBM ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ Thomas Watson က ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်က ကွန်ပျူတာ ငါးလုံးပဲ လိုမယ် ဟု ပြောခဲ့သည်။ ယခုအခါ နိုင်ငံအများစုမှာ လူတိုင်းက ကွန်ပျူတာကိုယ်စီနှင့် ဖြစ်နေကြသည်။ နည်းပညာကို ဖြစ်မယ်မထင်ပါဖူးလို့ လျှော့တွက်တာမျိုး မဖြစ်သင့်ပေ။
အမေရိကားတို့လို့ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံများက အမြဲထိပ်မှာ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ နည်းပညာပိုင်းနှင့် တီထွင်ကြံစည်မှုတွေ လုပ်မှသာရမည်ဟု ယုံကြည်ထားသောကြောင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကို အလေးထား တိုးတက်အောင် အမြဲဆောင်ရွက်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ယခုအခါ သဘာဝသယံဇာတတွေ ရှိသောကြောင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ လုပ်ကြသည်။ တနေ့မှာ ထိုသယံဇာတတွေ ကုန်ခန်းသွားလျှင် ကျန်ရှိမှာက လူသားအရင်းအမြစ်ပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နောင်တချိန် ကမ္ဘာနှင့်အညီ ခေတ်မီတိုးတက်ဖို့ မြန်မာတို့ နည်းပညာပိုင်းမှာ ခုတည်းက စတင်ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်နေပေသည်။
Ref: Physics of the Future: The Inventions that will Transform Our Lives (Michio Kaku)
From Third World to First: The Singapore Story (Lee Kuan Yew)
Engineering Capacity in Developing Countries
၁၇ သြဂုတ် ၂၀၁၂
(၂၃ ရက် သြဂုတ်လ ၂၀၁၂ ထုတ် Venus News Journal တွင် ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်)
Permalink Reply by zawzawlwin on October 20, 2012 at 17:07
ဆရာအောင်သင်းပြောသလိုပြောရရင်တော့ ဖင်အောက်မှာခုထိုင်ထားတဲရေနံ မတူးတတ်ရင်ခံလိုက်ပေါ့ ..။ခုခတ်ကပညာနဲပြိုင်တဲ နိုင်တဲခေတ် ဈေးပန်းခေါင်းရွက်တဲခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးလေ..။လူခယ်တွေပညာတတ်မျကိုဖြစ်မဲ့ခောတ်ပါ ..။အားလုံးကတတ်ညီလက်ညီကြီုးစားရင် နောက်15နှစ်အနှစ်20 ဆိုရင် အရှေတောင်အားရှမှာ မြန်မာဆိုတာလက်မထောင်နိုင်ပါပြီ .သူများတွေအထင်သေးတဲဘ၀ ကလွတ်မြောက်အောင်ကမ္ဘာမှာမြန်မာဟေ့ လို့ ဂုဏ်ယူစွာပြောနိုင်အောင် ဗျုလ်ချုပ်ပြောသလို 4.5.10.လှမ်း လှမ်းဖို့လိုပါပြီ။ ကဲအားလုံး စလိုက်ကြစို့ရဲ။
Permalink Reply by mgkothu on October 20, 2012 at 19:52
Permalink Reply by Ko tet on October 20, 2012 at 20:21
thanks,I want to read more if possible.
Permalink Reply by Yi Lin on October 20, 2012 at 23:15
we need to improve Human Resources
Permalink Reply by Soe Lay on October 21, 2012 at 2:01
အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကြိုးစားနေပါတယ်း)
Permalink Reply by baby on October 21, 2012 at 9:20
Permalink Reply by haukhanpau on October 21, 2012 at 10:15
Permalink Reply by Phyo Maung Maung on October 21, 2012 at 12:10
Permalink Reply by Ye Htet Naing on October 21, 2012 at 14:07
ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဆေးပညာဘက်ကိုလည်း နည်းနည်းသုံးသပ်ပေးသင့်ပါသည်။
Permalink Reply by nyein nyein Aye on October 21, 2012 at 18:11
Thank you. Need to Know how to use human rsourse. Should be right place for right person.Otherwise people still run away from motherland.
Permalink Reply by Aung Kaung on October 22, 2012 at 8:47
Actually thanks you so much for this article. That would mean so muchalot for everyone who is Myanmar.
Permalink Reply by waitunoo on October 22, 2012 at 19:50
It's true,we all have to prepare for the coming future about our need such as professional skills,critical thinking,etc.